नदी दोहन तीव्र - A2Z Online Khabar A2Z Onlinekhabar
बाँके, वैशाख १५ – बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको धेरै भूभाग खोला र राप्ती नदी आसपासमा पर्छ । जहाँ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रशस्त पाइन्छ । राप्तीसोनारीको वडा नं १, २, ५, ६ र ९ को अधिकांश क्षेत्र खोलानाला र नदीको बगर क्षेत्रभित्र पर्दछ । यही क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैधरूपमा दोहन भइरहेको छ ।
टिपरले बोकेर डम्पिङ गरेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सोही क्रसरबाट प्रशोधन गरिन्छ । हुलाकी सडकका लागि ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री कति आवश्यक छ ? अहिलेसम्म कति परिमाणको सामग्री उत्खनन भएको छ ? यसबारे कुनै लेखाजोखा छैन । तर, नदीबाट उत्खनन भइरहेको निर्माण सामग्री हुलाकी सडकका नाममा अन्यत्रै आपूर्ति भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी नै यसका मतियार बनिरहेका छन् । वर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा दिनरात खोला तथा नदीमा जथाभावी दोहन हुँदा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘धेरै नागरिकले सिडिओ कार्यालयमा गुनासोसमेत गर्नुभएको छ’, प्रजिअ भुजेलले भने, ‘नागरिकको गुनासोपछि मैले स्थानीय तह, प्रहरी र गृह तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत परिपत्र गरेको छु, सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन ।’
क्रसर उद्योग सञ्चालकले गुन्डा राखेरै स्थानीयवासीलाई डरधम्की देखाउँदै खोला तथा नदी दोहन गरिरहेको गुनासा आफूसमक्ष आएको प्रजिअ भुजेलले बताए । उनले आफूले नदी दोहन रोक्न पटक÷पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अटेरी गरिरहेको बताए । ‘प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न खोज्दा चौतर्फी दबाब आउने गर्छ’, प्रजिअ भुजेलले भने ।
समितिको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दा प्रहरी प्रशासन, समन्वय समितिलगायत सरोकारवाला निकायमा पुगेर राप्ती नदीको जथाभावी दोहन रोक्न माग गरेका थिए । तर, कतैबाट पनि स्थानीयवासीको माग सुनुवाइ नभएको डिल्ली गिरी बताउँछन् । ‘नदीमा दिनरात एक्साभेटर चल्छ, एक्साभेटरले जथाभावी निकालेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा दिनरात टिपरले ओसारिरहेका छन, क्रसर र एक्साभेटर रातभर चल्छन्, राम्ररी सुत्नसमेत पाइँदैन’, उनले भने ।
विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर निकाल्दा आपत्ति नरहेको तर, ठूला आयोजनाको बहानामा जथाभावी दोहन गरी सामग्री अन्यत्रै बेच्ने गरेको पाइएको प्रजिअ भुजेल नै बताउँछन् । उनको यस्तो भनाइले जनप्रतिनिधिको संरक्षण र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण नियमनकारी निकाय प्रशासनसमेत निरीह छ । नदीमा भइरहेको दोहनमा जिल्ला समन्वय समितिका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको आरोप छ ।
राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्ने गरी एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभावी दोहन गर्ने क्रम बढेकोे वडा नं २ का वडाध्यक्ष मदन ओली बताउँछन् । उपभोक्तालाई बिक्री गरेका रसिद र प्रहरीले समय–समयमा नियन्त्रणमा लिएका टिपरबाट हुलाकी सडकको आडमा निर्माण सामग्री बाहिर सप्लाइ हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने स्थानीयवासी बताउँछन् ।